» ब्रेकिङ:ओली पार्टी बाट बर्खास्त भएपछि माधव नेपाल बने नेकपाको नयाँ अध्यक्ष ,अब के होला ? हेर्नुहोस ब्रेकिङ:ओली पार्टी बाट बर्खास्त भएपछि माधव नेपाल बने नेकपाको नयाँ अध्यक्ष ,अब के होला ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
ब्रेकिङ:ओली पार्टी बाट बर्खास्त भएपछि माधव नेपाल बने नेकपाको नयाँ अध्यक्ष ,अब के होला ? हेर्नुहोस
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीबाट बर्खास्त भएपछि नेकपाको नयाँ अध्यक्षमा माधव नेपाल चयन गरेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरेसँगै सोही बैठकले माधव नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको घोषणा गरेको हो ।
बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सच्चिएर आए फेरि पनि पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताए।